Buugga Lonavala Khandala Tour Package | Wac lambarka: + 91-993.702.7574
Lonavala waa saldhig hoy ah oo loo naqshadeeyey dahabkii Sahyadri Mountains meel u dhow Mumbai oo ku taal Maharashtra. Bandhiga Lonavala Khandala wuxuu ku siinayaa fursad aad ku aragto wax qurxoon iyo qurux badan, oo leh bac dhamaystiran oo xasuusiya. Dabiicad badan oo dabiiciga ah oo ah qaabab biyo-xireen, qulqulo iyo dooxooyin, cawska qoryaha, harooyinka iyo godadka qadiimiga ah ayaa ka dhigaya Janno Lonavala oo yaryar iyo meel udhaxeysa meel bannaan oo ka fog buuqa iyo dhaqdhaqaaqa nolosha magaalada. Socdaalkan ayaa kaa qaadi doona meelo leh jawi dabiici ah oo cagaaran, aragti iyo jaahwareer ah oo lagu daboolo dhammaan cagaarka. Lonavala waxay u timaadaa nolosha inta lagu jiro xilliga monsoon maadaama ay baadiyadu u noqotey cagaar cagaaran oo leh biyaha iyo balliyada. Bandhiga Lonavala Khandala waxaa loogu talagalay dadka doonaya in ay waqti ku qaataan meelaha qurxoon ee galbeedka ghats. Ghats iyo dooxooyinka Lonavala iyo Khandala waa kuwo aad u qurux badan oo hammuun leh oo ka dhigi kara khibradaada socdaalka oo dhan. Bandhigga Lonavala Khandala wuxuu bixiyaa meel aad u fiican oo ah meel lagu nasto oo qofku helo waqtiga ugu fiican noloshooda. Saldhigyada buuraha ee Khandala ayaa arkay kor u kaca iyo dhacdooyinka boqortooyooyinka badan sida Marathas, Peshwas iyo xitaa awoodda gumeysiga wadamada yurub. Sandbalka Cagaaran ee Tour Tour Travel wuxuu bixinayaa qiime dhimis ah oo ah 10 munaasabadda Maalinta Xornimada. Waxaanu bixinnaa Bandhig Lanaadi ah oo Lonavala Khandala ah oo ku habboon lammaanaha, saaxiibada ama qoyska.
Safarkeena, waxaad heli kartaa safar fasax oo ah noloshaada oo aad weligaa ku riyootay. Waxaan hubineynaa in aad heli doonto waayo-aragnimo fasax ah oo leh xusuusta noloshooda.
Safarka Lonavala - Khandala
Code Code: 245
Maalmaha 03 / Maalmaha 04
Markaad tagto garoonka Mumbai / tareenka tareenka, soo qaado oo u wareeji Lonavala. Markaad timaaddo, jeeg-geli hudheelka. Lonavala ayaa caan ku noqotay sababtoo ah dabeecada sida dabiiciga ah sida: dooxooyinka, buuraha, biyaha qoyan, cagaarka cagaaran iyo dabaylaha dabiiciga ah. Gobolkaasi waxaa ka buuxa qurux dabiici ah. Lonavala waa gabay ficil ah oo Ilaah abuuray. Subaxdii kordhay halkan waxay u egtahay sidii ay u rusheeyeen biyaha oo dhan. Shimbiraha Chirping si tartiib ah ayay u kicin karaan naftooda, dhammaantoodna waxay sameeyaan subax dhab ah oo wanaagsan. Maalinta inteeda kale waxaad ku darsataa wakhtiga firaaqada ama waxaad dooran kartaa inaad sahamiso suuqyada maxaliga ah si aad uga heshid raashinka raashinka ee Lonavala. Habeenimadu waxay joogtaa Lonavala.
Maanta, waxaad sii wadi doontaa booqashada Bhushi Dam, oo ah meesha ugu caansan magaalada oo dhan. Waa meesha ugu fiican ee loogu talagalay dadka jilicsan. Waxaa jira qulqulo qulqulaya, meel u dhow barxadda, sidoo kale waa meel caan ah. Ka dib booqo Ryewood Park, oo sidoo kale ku yaal suuqa Suuqa Lonavala oo soo bandhigaya aragti weyn. Cawsku waa mid aad u fiican, waxaadna ka heli doontaa geedo kala duwan iyo ubax midab leh. Ka dib booqo Lake Tungarli, kaydka farsamada ah ee Lonavala iyo ilo muhiim ah oo biyo ah oo loo fidiyo magaalada Lonavala. Maalinta soo hadhay waa wakhtiga firaaqada ah kadibna waxaad fariisanaysaa habeenkii Lonavala.
Quraacda hoteelka. Kadib quraacda booqo Khandala (15 kms / 30 daqiiqo). Iyada oo lagu daboolayo meelo lagu arko sida: Karla Caves, Visapur Fort, Walwan Dam. Ka fariisiga Khandala kana raaxeyso ra'yiga ka jira goobaha dabiiciga ah ee cimilada wanaagsan. Ku soo laabo hudheelka habeenkii ee Lonavala.
Quraac kaddib, ka hubi hoteelka. U socdaalka Mumbai si aad ugu noqoto gurigaaga tareenka ama duulimaadka.